नयाँ बर्षमा घुम्न जाने मुड बनाउँनुभएको छ ? हेर्नुहोस् होटलहरुले ल्याए यस्ता प्याकेज - samayapost.com
नयाँ बर्षमा घुम्न जाने मुड बनाउँनुभएको छ ? हेर्नुहोस् होटलहरुले ल्याए यस्ता प्याकेज
समयपोष्ट २०७४ पुष ८ गते १५:०३
नजिकिएको अंग्रेजी नयाँ वर्ष (सन् २०१८) र ‘क्रिसमस डे’ लाई लक्षित गरेर यतिखेर पर्यटन व्यवसायीले नयाँ–नयाँ ‘प्याकेज’ सार्वजनिक गरेका छन् ।
खासगरी रात्रिकालीन मनोरञ्जन व्यवसायीले पाहुनालाई विभिन्न सेवामा विशेष अफर ल्याएका छन् ।
इशाई धर्मावलम्बीले उक्त धर्मका संस्थापक जिसस क्राइस्टको जन्मदिनका रुपमा क्रिसमस डेलाई मनाउने गर्छन् । दुई हजार १७ वर्ष अगाडिदेखि सोही धर्मावलम्बीले इस्वी संवत् प्रारम्भ गरेका हुन् । पर्यटनलाई संस्कृतिसँग जोडेर व्यवसायीले विभिन्न पर्वका अवसरमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउने गरेका छन् ।
ठमेलको ‘रियल थेरापी एण्ड ब्यूटी प्वाइन्ट’ले नयाँ ग्राहकका लागि विभिन्न सेवामा ५० प्रतिशतसम्म छुटको अफर ल्याएको छ ।
जाडोको समयसँगै नयाँ वर्षको अवसर पारेर यो छुट ल्याइए पनि पुराना नियमित ग्राहकलाई अझै बढी छुटको व्यवस्था गरिएको कम्पनीका सञ्चालक भविश्वर शर्माले बताए ।
रियल थेरापीले ‘विन्टर भ्याकेसन’ छुटअन्तर्गत अफुरो, साउना, स्टिम, मसाजलगायत विभिन्न सेवामा नेपाली ग्राहकका लागि ५० प्रतिशत छुट दिइने जनाएको छ ।
जापानमा चर्चित ओफुरो, आयुर्वेदिक मसाज, हटस्टोन मसाज, ज्वाइन्ट पेन रिलिफ मसाज, रिल्याक्सेसन मसाज, अकुप्रेसर थेरापीलगायतका सेवासमेत सञ्चालनमा रहेको सञ्चालक शर्माले बताए ।
क्रिसमस डे र नयाँ वर्षलाई लक्षित गरी ठमेलमा नयाँ क्लब र रेस्टुराँ खुल्ने क्रम पनि जारी छ । यसै सन्दर्भमा सुविधायुक्त ‘टर्टल लाउञ्ज एण्ड क्लब’ शुक्रबारदेखि शुरु भएको छ ।
नयाँ वर्षको अवसर पारेर ठूलो लगानीमा नयाँ क्लब शुरु गरिएको व्यवसायी आयुष ठकुरीले बताए। उनले ठमेलमै करोडौँको लगानीमा ‘ब्लू बार’ नामक रेस्टुरेन्ट तथा ‘सर्कल गजल एण्ड लाउञ्ज बार’ सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
होटल एशोसिएसन अफ नेपाल (हान) का महासचिव विनायक शाहले क्रिसमस डे र नयाँ वर्षलाई लक्षित गरी तारे होटलदेखि पर्यटकस्तरीय होटलले विभिन्न प्याकेज ल्याएको बताए ।
पर्यटकीय क्षेत्र ठमेलमा नयाँ वर्षको अवसरमा सडक महोत्सवको तयारी भइरहेको ठमेल पर्यटन विकास परिषद्ले जनाएको छ ।
नयाँ वर्षकै सन्दर्भमा रेस्टुरेन्ट तथा बार एशोसिएसन नेपाल (रेबान) ले यही ‘डिसेम्बर २८ देखि जनवरी १’ सम्म पोखरामा १९औँ पोखरा सडक महोत्सव आयोजना गर्दैछ ।
रेबानका अध्यक्ष प्रमोदकुमार जैसवालले नयाँ वर्षको सन्दर्भमा रेस्टुरेन्टले विभिन्न सेवामा छुटसहितका नयाँ प्याकेज ल्याएको बताउनुभयो ।